Shiinaha oo si Deg-deg Maraakiib dagaal ugu soo diray xeebaha Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Shiinaha ayaa maraakiib dagaal u so dirtay xeebaha Soomaaliya, si ay Burcad-badeedda uga waardiyeeyaan maraakiibta iyo doonyaha Rayidka Shiinaha ee maraya Gacanka Cadmeed.
Raxan maraakiibta dagaalka ah ayaa Sabtidii ka soo baxay magaalada Sanya, oo ku taalla Gobolka Hainan ee Koonfurta waddanka Shiinaha, kuwaas oo ku wajahan Gacanka Cadmeed, sida ay sheegtay wakaaladda Wararka Xinhua News.
Maraakiibtan oo ah kuwa gantaalaha xambaara, waxaa dushooda saaran in ka badan 700 oo askar iyo saraakiil ka kooban, kuwaas oo ay ku jiraan Ciidamada sida gaarka ah u tababaran, sida laga soo xigtay wakaaladda Xinhua.
Waxa xusid mudan, in ay jiraan maraakiib iyo doonyo laga leeyahay Shiinaha oo jariif ba’an ku haya xeebaha Soomaaliya, inkastoo aysan caddayn in kuwaas lagu waardiyayn doono maraakiibta dagaalka.